Mootummaan Dr Abiyyiin HD ABO Daawud Ibsaa ajjeesisuuf dalagaa jira – Ayyaantuu Online
Mootummaan Dr Abiyyiin HD ABO Daawud Ibsaa ajjeesisuuf dalagaa jira
Mootummaan Dr Abiyyiin durfamu HD ABO jaal Daawud Ibsaa ajjeesisuuf halkaniif guyyaa dalagaa akka jiru odeessi arganne ifa godha.
Mootummaan Dr Abiyyiin durfamu HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa ijjeesisuuf halkaniif guyyaa dalagaa akka jiru odeessi arganne ifa godha.
Akka odeessi ifa bahe ibsutti Adoolessa 30/2020 namoonni dirqama kana fudhatanii haala ittiin HDn ijjeefamu marii ballaa geggeessaa turan.
HD ABO Jaal Daawud Ibsaa uggurri akka manaa hin baane irra kaa’amee ture Adoolessa 30/2020 haa kaafamu kan jedhu nu dhaqqabee ture. Kanaanis uggurri irraa ka’ee jira.
Amma kan itti aanu HD ABO Jaal Daawud Adoolessa 31/2020 halkan keessa ykn Hagayya 1/2020 barii qaamni naannoo mana isaaniitti ramadamee akka ijjeechaa kana raawwatu qorannoon xumuramee jira.
Akka odeessi nu gahe ifoomsutti gocha ijjeechaa kana adda dureen kan qindeessaa jiran Mootummaa irraa dirqama fudhatanii wal gahii guyyaa lamaa oliif gaggeessaa kan turan nama #Alamuu_Qinaaxxii jedhamuu fi #Beyyanee_Biraanuu ta’uu oduun milixxee baate ni ifoomsiti. Haala kanaanis guyyoota muraasa dabran mana HD ABOtti namni gabaabaa jiddu galeessi eye glass gurraacha godhatee mana seenee bahee galu akka jiru bira geenneerra.
Gochaa kana yeroo raawwatanis Mana HD Jaal Daawud Ibsaa keessa huccuu military baay’inni isaa 50 ol tahe kaayuuf karoorfameera.
Kanaaf guyyaa hardhaa halkan irraa qabamee gochaan kun raawwatamuuf nammooni dirqama fudhatanii socho’aa akka jiran qabatamaan qaruuxeen ABO Qeerroo Bilisummaa Oromoo jala bu’ee hordofaa jira.
Namoota dirqamaan ijjeefamuu HD ABO Jaal Daawud Ibsaa irratti hojjachaa jiran immoo Alamuu Qinaaxxii fi Beyyanee Biraanuu tahuu mirkaneeffanneerra.
Alamuu Qinaaxxii kun nama eegduu Abiyyi tureedha.
Uummatni keenna Oromoo biyya keessaa fi alaa gochaa kana jala buutanii akka hordoftanii fi dhimma kana akka hubattan isan beessimna.
Ijjeechaan kun ijoollee Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti illee qiyyaafatee akka jiru qabatamaan bira geennee jirra!
WARRAAQSI OROMOON GEGGEESSU HAALA KANAAN YOO DEEME BU’AA QABEESSA TA’A:
-Kan Uummata keenna baroota dheeraaf hacuucaa ture, kan qaroowwan ilmaan Oromoo nyaachaa ture, kan ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jiru Sirna Mootummaa gabroomfataa Abbaa Irree dhufee dabraan Afaan Qawween nu hacuucaa jira waan ta’eef, Sirna Mootummaa kanaa hunkuteessuu irratti xiyyeeffachuun ufirraa kaasuuf hojjachuu feesisa. Kun ammoo ganda, aanaa fi godina irratti teessoo Sirna Mootummaa kanaa beekuufi adda baafachuudhaani.
-Qaamota Sirna Mootummaa Nama nyaataa gabroomfataa kana Uummata keenna keessatti gadi dhaabuuf hojjatan adda baafachuudhaan Uummata keessaa baasuu. Qaamni kun akka namaattillee hawaasa keessa akka hin jiraanne dhiibbaa gochuu fi Aga danda’aame barsiisuu.
-Kan ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuruufi ijeesee ijjeesisu Waajjiraalee Bulchiinsaafi Nageennaa waan ta’eef isaan kana irratti xiyyeeffachuu. Hogganoota nageenna Mootummaa adda baafachuu.
-Oromiyaa keessatti oomishaaleen adda addaa ni oomishamu. Hedduun isaanii Mootummaa nama nyaataa kanaaf tumsa kennanii Uummata keenna fixaa jiru. Oomishaaleen kunin akka hin sochoone goodanii dhowwuu, daandii gugurdaa biyyoota Ollaa Oromiyaa wal qunnamsiisuufi gara Finfinnee geessu kutuu. Dhaabbataalee gurgurtaa harka diinaa ta’an irraa bittaa fi gurgurtaa dhaabuu.
-Diina innikaa Saba Oromoo kan ta’e humna #Nafxanyaa akka ta’e hubachuun leellistoota sirna kanaa Oromiyaa keessa jiran akeekkachiisuu; yoo didan uf keessaa baasuu.
-Warraaqsi kun mandheelee Caasaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa hunda keessa jiraniin kan hogganamuudha. Kun ammoo Warraaqsi kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo galmaan ga’uuf kan deemu ta’uu akka qabuufi akkuma akeeka Qabsoo Bilisummaa Oromootti Sirna Mootummaa kanaa kuffisuuf akka hojjatamuufi. Kana malees miiraan geggeeffamee waan didiqqoodhaan akka hin burjaajjomne gochuudhaafi.
-Qajeelfama kennamu wal hordofaa deemuudhaan yeroo fi guyyaa wal fakkaatutti hojii diina rifaasisu hojjachuu.
-Wareegama hirdhimnee bu’aa guddaa fiduuf humna Waraanaa Mootummaa Faashistii Xoophiyaa kallattiin dura dhaabbachuu dhiimnee mimmiliquudhaan hojjachuu.
#Hub: Saboota biraa kan Oromiyaa keessa nagaan jiraatan akkuma maatii Oromoo tokkootti eegumsa isaaniif gochuudhaan akka isaan hin jeeqamne taasisuu qabna. Qabeenna isaaniifi lubbuu isaaniif wabii taanee qabsoon keenna Bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf akka ta’e firaafi diinaaf hubachiisuu qabna. Qaamota saboota kaan irratti xiyyeeffatan uf keessaa baasuufi wal gorsuu qabna.
Walumaagalatti, Qabsoon nuti geggeessinu Sirna Mootummaa Abbaa irree irratti ta’uu hubachuun sirnicha fonqolchuuf hojjachuun barbaachisaadha.
#Hayyuu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa hojii idilee waajjiraa muumee ABO har’a eegalaniiru.
Obbo Atoomsaan waajjiraa deebi’uu Hayyuu duree argutti dhaadachaa oolun dhagahamee jira. Jechaa Atoomsaa “guyyuma tokkoo fi namaa xinnaa qofatu hafeef” jechuun humnoota tikaa biyyooleessa waliin kakachaa ooluun dhagayameera.
Obbo Atoomsaa hayyuu duree ABO gullallee deemuutti hedduu murfii qabachuun isaa akkuma jiruutti ta’ee dhaadannoo hayyuu duree guyyaa tokkoo qofaa qabdaa jechuun iccitii fi sagantaa lafaarraa qaban ifa baasee jira.
Miseensoota fi deeggartoonni akkasumaas uummanni oromoo nageenyaa hayyuu duree keenyaaf dhaabachuun dirqamaa keenya hundumaatti.
Atoomsaan dhaadachuu kee ofii raawwataa osoo hin ta’iin sagantaa fi karooraa lafaa jiruu himaa jirta. HD irraatti wan akeekaan raawwatamee booda eenyuu lubbuun hafaan gaafi haa ta’uu.